Imibongo yabahlobo abakhethekileyo Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Imibongo kubahlobo abakhethekileyo
Veza kwaye uthethe ngeemvakalelo zobuzalwana, khumbuza abahlobo bethu ukuba banokuthembela kuthi, ukuba asibalibali kwaye bahlala bekho.
Ukuthumela umsitho, iholide okanye usuku olumiselweyo, olufana nesikhumbuzo, usuku lokuzalwa, ukujongana nalo naliphi na ilishwa okanye nawuphina umhla enyakeni ngaphandle kwesizathu esithile.
1 Imibongo kubahlobo abakhethekileyo
2 Imiyalezo elungileyo kubahlobo bethu
3 Iividiyo zemibongo zabahlobo abakhethekileyo
Kuthatha umzuzu nje ukuba uqaphele umntu, iyure yokuba ubathande, usuku lokumthanda, kodwa kuthatha ixesha lokulibala.
Ukuba uyafa phambi kwam, cela ukuba ungahamba nomhlobo wakho.
Ukuba uhlala ikhulu leentsuku, ndifuna ukuhlala i-100 thabatha enye, ke akufuneki ndiphile ngaphandle kwakho.
Ndiyabulisa mhlobo wam olungileyo kwaye ndicela uThixo akusikelele, ndikunqwenelela okuhle kodwa ubenemini emnandi.
Abahlobo abanjengawe abafumaneki, kweli hlabathi lobuxoki, ubuhlobo bokwenene bunqabile.
Wonke umntu uyayimamela into oyithethayo, abahlobo bamamela yonke into oyithethayo, abahlobo abalungileyo bayamamela nakwinto ongayithethi.
Ukukhumbula kwakho akubizeli umnxeba, ukukubhalela, ukukubona okanye ukwazi ngawe. Kukukhumbula, ukujonga isibhakabhaka kwaye ucela uThixo ukuba akukhathalele kwaye akukhusele, naphi na apho ukhoyo.
Ukuba nomhlobo onjengawe kundinike ithamsanqa. Ubuhlobo obufana nobakho sisipho endisinikwe nguThixo. Abahlobo bokwenene bayimpilo; ngekhe ulazi ixabiso laso elikhulu de lilahle.
Ubawo wayedla ngokuthi xa usweleka ukuba unabahlobo bokwenyani aba-5, ke ube nobomi obumnandi.
Umhlobo ngumntu owaziyo ingoma evakalayo entliziyweni yakho, kwaye unokuyicula xa ungazikhumbuli iingoma.
Bamba umhlobo olungileyo ngezandla zozibini kwaye ungaze uyeke.
Sonke sithatha iindlela ezahlukeneyo ebomini, kodwa nokuba siyaphi, sithatha kancinci kumhlobo ngamnye.
Ngamnye ubonisa ukuba yintoni, kuxhomekeke kubahlobo onabo.
Hayi indlela ekunzima ngayo ukuphumelela umhlobo ngonyaka, kwaye kulula kangakanani ukuphulukana naye ngephanyazo!
Abaphambukeli ngabahlobo nje abanokubakho, abalinde ukudibana nokujongana nabo.
Umhlobo ngulowo uza ngokulungileyo, kwaye kokubi ukwenza ngaphandle kokubizwa.
Abahlobo banjengegazi, xa omnye enzakele, beza bengabizwanga.
Abahlobo yindlela kaThixo yokusikhathalela.
Umhlobo wenene ngulowo ukulandelayo, nokuba awunanto unokunikela ngayo ngaphandle kwenkampani yakho.
Iintyatyambo ezimbini emanzini zihlala kuphela kwiintsuku ezilishumi elinesihlanu, kodwa abahlobo ababini abalungileyo bahlala ubomi babo bonke.
Amaxesha amabi azisa abahlobo bokwenene. Ngamaxesha amabi uyazi ukuba ngubani okufaneleyo ... ngamaxesha amnandi nabani na ...
Umzalwana ngumhlobo osinika indalo. Umhlobo ngumzalwana osinika intlalo.
Ngokuvalelisa komhlobo, isiqingatha seentliziyo zethu simkile.
Umhlobo wokwenene ngulo: Lowo uzibamba ngesandla aze achukumise intliziyo yakho.
Ukuba utyala imbewu yobuhlobo, uya kuvuna isipha solonwabo.
Ibhotile yesiqholo igcinwe kwidrowa, inkumbulo yomhlobo ithwele entliziyweni.
Uthando luzalwa ngokuwa eluthandweni; ubuhlobo kutshintshiselwano olusempilweni nolungenamdla.
Ukuba ufuna ukutsiba ibhulorho, andizukutsiba nawe…. Ndingaphantsi ndikubulise.
Njengoko uhamba ngenqanawa kwiilwandle zobu bomi, khumbula ukuba unezibuko entliziyweni yomhlobo wakho.
Abahlobo zezo ziluma kamnandi kwisaladi yobomi.
Ndibambe, ndizokubambelela kuwe sizolunga.
Abahlobo bokwenene bakukhathaza ngenyaniso, endaweni yokukubulala ngobuxoki.
Imiyalezo elungileyo kubahlobo bethu
Ukuba uya ekhitshini uze ubone imelon ... khumbula lo mhlobo okuthanda kakhulu.
Eyona nto inzima asikokufela umhlobo, kodwa ukuba nomhlobo ofanele ukufela kwaye ndinayo.
Khange ukhubeke xa ndiphakamisa ilizwi, khange undigwebe xa ndiwa kubabalo, awuzange ube nomsindo xa ndingakumameli. Ubusoloko ungumhlobo, enkosi!
Ndidinga umhlobo ozondikhusela, bendidinga umhlobo ondicebisayo, bendifuna umhlobo ondiphilisayo, kwaye ubonakalisile, uhlala ekulungele ukundinyamezela.
Enkosi ngokuba ngumhlobo wam!
Abahlobo ngamaqabane ethu kwindlela yobomi, bayasinceda ukuba siqhubele phambili, bayasixhasa ukuba siwile, bayasiphakamisa umoya wethu xa siziva singenamandla; zisinceda siphile ubomi obonwabisayo. Ngamanye amaxesha asiphukelwa ngumkhombe ngenxa yabahlobo bethu.
Enkosi ngobuhlobo bakho!
Sukujonga kumagama okanye ekubhaleni, khumbuza lo mhlobo okuthandayo uphambene.
Iividiyo zemibongo zabahlobo abakhethekileyo
Imibongo emide yomhlobo wam osenyongweni
Imibongo yezihlobo ezifutshane